ကုနျပစ်စညျးရဲ့ ကုဒျနံပါတျ: VAQGF450
VAQGF 450 Automatic 5G bottle washing, filling, capping 3-in-1 machine is produced with the most advanced technology in 2019. Our machine is one of the specialized products that has been chosen byavariety of purified water bottling companies.
VAQGF 450 စက်ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်ရဲ့ လေတ်အမီဆုံးနည်းပညာနဲ့ အထူးစပါယ်ရှယ်ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့် ဒီစက်ဟာ ရေသန့်ဘူးကုမ္ပဏီများရဲ့ ရွေးချယ်မှုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
The product is currently distributed by Viet An General Trading Joint Stock Company -aleading company in manufacturing, importing and distributing the best water filtration lines, filling machines in Vietnam.
With the application of the most moder technology of the United States, our machine with the absolute precision has satisfiedavariety of customers in bottled water manufacturing industry.
Viet An ကုမ္ပဏီမှ တင်သွင်းဖြန့်ချီတဲ့ ရေစစ်ထုတ်တဲ့လိုင်း၊ လောင်းဖြည့်တဲ့စက်တွေဟာ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှာ အကျော်ကြားဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ U.S ရဲ့ ခေတ်အမီဆုံး နည်းပညာနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားတာကြောင့် ဝယ်ယူသူတွေကိုလည်း စိတ်ကျေနပ်မှု အပြည့်အဝရစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
VAQGF 450, 3-in-1 automatic 5G bottle washing, filling, capping machine is produced with the most advanced technology of the United States.
We are confident that VAQGF 450 3-in-1 automatic 5G bottle washing, filling, capping machine is genuine and fully certified. Our machines are either manufactured by Viet An or directly, imported from America, Italy, German, Japan, Korea, China or per customers’ requests. The manufacturing process complies with ISO 9001:2015 standard - the most stringent standard today.
This machine is designed with industrial compact appearance and stainless steel parts. VAQGF 450 3-in-1 automatic 5G bottle washing, filling, capping machine is of nice appearance, more durable usage, less maintenance and stable, gently operation. Besides, it does not take too much manufacturing area. With3automatic steps integrated, the filling and capping processes are operated quickly and exactly, satisfying food hygiene and safety standards stipulated by the Ministry of Health.
Viet An provides filling and capping machine 3-in-1 machines withavariety of capacities to meet the diverse needs of customers. We believe that with our wide range of good quality filling and capping machines and perfect service quality, we will satisfy our customers.
VAQGF 450 စက်ကို U.S ရဲ့ ခေတ်အမီဆုံး လောင်းထည့်တဲ့နည်းပညာနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားတယ်။
ဒီစက်တွေကို Viet An ကုမ္ပဏီမှလည်း ထုတ်လုပ်သလို ဝယ်ယူသူ တွေရဲ့ တောင်းဆိုချက်အရ အမေရိကန်၊အီတလီ၊ဂျာမနီ၊တရုတ်၊ဂျပန်၊ကိုရီးယားစတဲ့ နိုင်ငံတွေမှလည်း တင်သွင်းပါတယ်။ဒီစက်ဟာ ISO 9001 စံနှုန်းလည်း မီပါတယ်။
ဒီစက်ကို သိပ်သည်းကျစ်လျစ်တဲ့ စက်ရုံသုံး 304 အစွန်းခံသံမဏိ နဲ့ ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီစက်ဟာ ပုံပြန်သွင်ပြင်လှပြီး ကြာကြာအသုံးခံပါတယ်။ထိန်းသိမ်းစရာလည်းသိပ်မလိုပါဘူး။ စက်ရဲ့ အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာလည်း ဆူညံမှုမရှိဘဲ ညင်ညင်သာသာ လုပ်ဆောင်ပါတယ်။ဒါ့အပြင် တပ်ဆင်ဖို့လည်း နေရာအများကြီး မလိုအပ်ပါဘူး။ အော်တိုအဆင့်တွေကြောင့် ဒီစက်ဟာ လုပ်ဆောင်မှု လျင်မြန်ပြီး ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဋ္ဌာနရဲ့ အစားအသောက်ရဲ့ ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်မှုကလည်း ကိုက်ညီပါတယ်။
Viet An ကုမ္ပဏီဟာဆိုရင်ဝယ်ယူသူ တွေရဲ့ လိုအပ်ချက်အမျိုးမျိုးကို ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ လောင်းဖြည့်ပေးတဲ့စက်တွေကို ထုတ်လုပ်ပေးနေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အရည်အသွေးကောင်းတဲ့ စက်ပစ္စည်းတွေနဲ့ အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုကြောင့် ဝယ်ယူသူတွေကို စိတ်ကျေနပ်မှု အပြည့်အဝပေးနိုင်မှာကို ယုံကြည်ပါတယ်။
VAQGF 450,3in 1 automatic 5G bottle washing, filling, capping machine is integrated with3automatic steps
VAQGF 450,3in 1 automatic 5G bottle washing, filling, capping machine is integrated with3automatic steps. The manufacturers will save maximum production area as well as labor costs with our 3-in-1 machine.
VAQGF 450 စက်ရဲ့အော်တိုလုပ်ဆောင်တဲ့ အဆင့် ၃ ဆင့်
VAQGF 450 စက်ကို အော်တိုလုပ်ဆောင်တဲ့ အဆင့် ၃ ဆင့်နဲ့ ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ထားတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အလုက်လုပ်ဖို့ နေရာအများကြီး မလိုတော့သလို အလုပ်သမားအင်အားကိုလည်း လျှော့ချနိုင်တယ်။
First step: Automatic cleaning inside and outside of the jar:
Structure: Conveyor belt, jar holders, conveyor motor, stainless steel pressure booster pump.
The 20L jars without caps are transferred to the jar holders of the machine. The chain conveyor will transfer the jars clockwise with the operation of the conveyor motor. The stainless steel pressure booster will spray pure water with sterilized ozone into to the jars to thoroughly clean them. The 20-liter jars, after being thoroughly cleaned in step 1, will be transfered to the filling heads.
တညျဆောကျပုံ: : ရှလြေ့ားစကျခါးပတျ၊ပုလငျးထညျ့စရာ၊ရှလြေ့ားစကျမျောတာ၊အစွန်းခံသံမဏိ ဖိအားမွှငျ့တငျပေးတဲ့ ရစေုပျစကျ
အဖုံးမပါတဲ့ ၂၀ လီတာပုလငျးတှကေို စကျရဲ့ ပုလငျးထညျ့တဲ့နရောဆီ ပို့ပေးရပါမယျ။ ရှလြေ့ားစကျခြိနျးက ပုလငျးတှကေို ရှလြွေားစကျမျောတာရဲ လုပျဆောငျမှုနဲ့ နာရီလကျတံအတိုငျး ရှပေ့ေးပါမယျ။ပုလငျးတှကေို ရှပွေ့ောငျးနတေဲ့အခြိနျမှာ ပုလငျးအတှငျးအပွငျသနျ့ရှငျးဖို့ အစွန်းခံသံမဏိ ရစေုပျစကျက ပုလငျးတှကေို ပိုးသတျပေးတဲ့ အိုဇုမျးပါရှိတဲ့ ရသေနျ့နဲ့ ဖွနျးပကျပေးမှာ ဖွဈပါတယျ။ ပုလငျးတှကေ သနျ့ရှငျး၍ ပိုးသတျပွီးသောအခါ လောငျးဖွညျ့ပေးတဲ့နရောကို ရှရေ့ပါမယျ။
The 20-liter jars, after being thoroughly cleaned in step 1, will be transfered to the filling heads. Model VAQGF45 is designed with3integrated filling heads connected to the pure water source through the duct system. The pure water is fully filled into the jars with3filling heads thanks to the piston movement. After being fully filled with water, the jars will be transferred to the capping heads for the third step.
VAQGF 450 စက်ကို ဖြည့်ပေးတဲ့ခေါင်း ၃ ခုနဲ့ ပြုလုပ်ထားတယ်။ ရေသန့်တွေကို ပုလင်းထဲသို့ ဖြည့်ပေးတဲ့ခေါင်း ၃ ခုက ပစ်စတိုရွေ့လျားမှုအတိုင်း ဖြည့်ပေးမှာ ဖြစ်တယ်။ ရေဖြည့်ပြီးတဲ့အခါ နောက်တဆင့်ဖြစ်တဲ့ အဖုံးတပ်ပေးတဲ့နေရာဆီကို ပုလင်းတွေ ရွှေ့ရမှာဖြစ်တယ်။
Model VAQGF45 is designed with 1 integrated filling heads connected to the pure water source through the duct system. The caps filled in the tray by the operators will be transfered to the cap head through the duct. This capping head is made of 304 stainless steel, using the piston's thrust for capping ataspeed of 450 caps / hour.
The jars, after being capped, would be transferred to the next steps thanks to thrust of the hydraulic cylinder.
ရေဖြည့်ပြီးတဲ့ ပုလင်းတွေကို အဖုံးတပ်ပေးတဲ့စက်ဆီကို ရွှေ့ရပါမယ်။ အဲ့ဒီစက်ခေါင်းတွေဟာ အရည်အသွေးမြင့် 304 အစွန်းခံသံမဏိနဲ့ ပြုလုပ်ထားပြီး ပစတိုရဲ့ လှုပ်ရှားမှုအတိုင်း လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။ ဒီစက်ဟာ တစ်နာရီမှာ ပုလင်းပေါင်း ၄၅၀ ကို အဖုံးတပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အော်ပရေတာတွေကနေ သယ်ယူလာပေးတဲ့ အဖုံးထည့်တဲ့ဗန်းကို ပြွန်ကိုဖြတ်ပြီး အဖုံးတပ်ပေးတဲ့ခေါင်းဆီသို့ ရွှေ့ပေးပါမယ်။ဒီစက်က အဖုံးတွေကို ပုလင်းအပေါ်မှာ ခိုင်ခိုင်မာမာ ကပ်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဖုံးပိတ်ပြီးသားပုလင်းတွေကို နောက်ထပ်အဆင့်တွေဆီကို ရွှေ့ပြောင်းပေးရပါမယ်။
The3automatic steps of cleaning, filling and capping are operated with the smart control panel attached onto the body of VAQGF450 machine. This control system can automatically operate cleaning, filling and capping processes according toaprogram automatically set before. More specifically, the system has the ability to automatically disconnect when there is an incident, making bottled drinking water production process much safer than other conventional filling machines on the market.
With above3automatic steps integrated, this AQGF 4503in 1 Automatic jar filling and capping machine would help the customers reduce 3-5 operators while still ensuring manufacturing efficiency.
ဒီအဆင့် ၃ ခုဟာ စက်ရဲ့ကိုယ်ထည်မှာရှိတဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ ထိန်းချုပ်စနစ်နဲ့အတူ လုပ်ဆောင်မှာ ဖြစ်တယ်။ ဒီထိန်းချုပ်စနစ်ဟာ အော်တိုတပ်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့ ပရိဂရမ်အရ သန့်ရှင်းခြင်း၊လောင်းဖြည့်ခြင်းနဲ့ အဖုံးတပ်ပေးခြင်းတွေကို အော်တိုလုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။ပိုပြီးတော့ စပါယ်ရှယ်ဖြစ်တဲ့ လုပ်ဆောင်မှုကတော့ ဒီစက်ဟာ ပြသနာတစုံတရာ ပေါ်ပေါက်လာရင် အော်တိုရပ်သွားမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့် ဈေးကွက်မှာရှိနှင့်ပြီးသားဖြစ်တဲ့ စက်တွေထက် ဒီစက်ဟာ ပိုပြီး လုံခြုံပါတယ်။
VAQGF 450 စက်ရဲ့ သန့်ရှင်းပေးခြင်း၊လောင်းဖြည့်ပေးခြင်းနဲ့ အဖုံးတပ်ပေးခြင်းတွေကြောင့် အော်ပရေတာ ၃ ယောက်ကနေ ၅ ယောက် အထိ လျှော့ချနိုင်သလို ပစ္စည်းတွေများများထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
Besides this 3-in-1 machine, Viet An also supplies many other types of machines for the production of bottled water. For more details, please refer click here
ဒီ3in 1 စက်အပြင် Viet An မှာ အခြားသော စက်အမျိုးအစားများလည်း ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ ပိုမိုသိရှိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ click here ကို နှိပ်လိုက်ပါ။
Application of VAQGF 450,3in 1 automatic 5G bottle washing, filling, capping machine
This VAQGF 450,3in 1 automatic 5G bottle washing, filling, capping machine offersawide range of outstanding advantages as follows:
3 in 1 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးပြီး အဖုံးတပ်ပေးသောစက် VAQGF 450 ရဲ့ လုပ်ငန်းသုံး ပရိုဂရမ်
3 in 1 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးပြီး အဖုံးတပ်ပေးသောစက် VAQGF 450 ဟာ အောက်ပါအတိုင်း ကောင်းကျိုးများစွာ ပေးပါတယ်။
1.Smart control system: With modern but easy to use design of the machine, customers can easily adjust the operating speed of the VAQGF450 automatic filling machine.
၁။ကောင်းမွန်တဲ့ထိန်းချုပ်စနစ်:ခေတ်မီပြီး လွယ်ကူစွာသုံးလို့ရတဲ့ ဒီဇိုင်းကြောင့် VAQGF 450 စက်ဟာ စက်ရဲ့ အလုပ်လုပ်တဲ့ အရှိန်နှုန်းကို လွယ်ကူစွာ ထိန်းညှိနိုင်တယ်။
2.Accuracy: Our products use rotary encoder to fill with more accuracy.
၂။တိကျမှန်ကန်မှု: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ပိုပြီးတိကျမှန်ကန်ဖို့ ကျွန်တော်တို့က ကုဒ်တွေကို လှည့်သုံးပါတယ်။
3.Filling speed: The product is designed with the frequency converter to adjust the filling speed. The extraction speed is adjustable via the control panel.
၃။လောင်းဖြည့်တဲ့နှုန်း:ဒီစက်ကို အရှိန်နှုန်းထိန်းညှိဖို့အတွက် မကြာခဏပြောင်းပေးတဲ့ ကွန်ဗာတာနဲ့ ပြုလုပ်ထားတယ်။ ထုတ်ယူတဲ့ နှုန်းကတော့ ထိန်းချုပ်ဘောင်မှတဆင့် ထိန်းညှိထားတယ်။
4.High durability: This is the most advanced extraction line currently. All components constituting the machine are genuine withahigh shelf life.
The machine offers fully automatic operation and self-contained. This VAQGF 4503in 1 automatic filling and capping machine distributed by Viet An would help your business with following issues:
Achieve high productivity of 450 5G bottle / hour
Increasing competitiveness of the enterprise products
Demonstrate professional working style
၄။ကြာရှည်ခံခြင်း:ဒါက အတိုးတက်ဆုံး ထုတ်ယူသောလိုင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစက်မှာပါတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေဟာ စစ်မှန်ပြီး ကြာရှည်ခံတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ ပြုလုပ်ထားတာ ဖြစ်တယ်။ ၄။ကြာရှည်ခံခြင်း:ဒါက အတိုးတက်ဆုံး ထုတ်ယူသောလိုင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစက်မှာပါတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေဟာ စစ်မှန်ပြီး ကြာရှည်ခံတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ ပြုလုပ်ထားတာ ဖြစ်တယ်။ ဒီစက်က လုံးဝအော်တိုလုပ်ဆောင်ပါတယ်။ဒီ3in 1 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးပြီး အဖုံးတပ်ပေးသောစက် VAQGF 450 ဟာ ဝယ်ယူသူတွေကို အောက်မှာပါတဲ့အချက်တွေနဲ့ အကူအညီပေးပါလိမ့်မယ်။
• တစ်နာရီအတွင်း ပုလင်းပေါင်း ၄၅၀ ထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်း
• ကုန်ပစ္စည်းရဲ့ အရည်အသွေးကို အာမခံခြင်း
• ပစ္စည်းထုတ်လုပ်တဲ့ အချိန်နဲ့ အလုပ်သမားအင်အား လျှော့ပေးတါကြောင့် အရင်းအနှီးများများ မကုန်ခြင်း
• လုပ်ငန်းစီးပွားရေး အားပြိုင်မှုတွေ ပေါ်ပေါက်ခြင်း
• ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆန်ဆန် အလုပ်လုပ်နိုင်ခြင်း
• စိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့ ကိုယ်ပိုင်တံဆိပ်တွေ ထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်း
The automatic steps integrated into VAQGF450 can be separately purchased (not compulsory to purchase)
Viet An always leapfrog, constantly improve and update the latest technology in the world. We are always looking forward to providing bottled domestic and international drinking water enterprises with modern, automated production lines that bring high efficiency. In addition to the 3-in-1 automatic bottle filling and capping machines, Viet An also provides other types of automatic machines so that customers can integrate into the 3-in-1 machine to buildafully automatic filling and capping line. Here are some suggestions for customers for installation investment
းခြားဝယ်ယူပေးချေရမယ့် VAQGF 450 နဲ့ တွဲစပ်ထားသော အော်တိုအဆင့်များ ( မဝယ်မနေရမဟုတ်)
Viet An ကုမ္ပဏီဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ တိုးတက်ပြီး အဆင့်အမြင့်ဆုံး နည်းပညာတွေကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ကုမ္ပဏီဟာ ပြည်တွင်းပြည်ပ ရေသန့်ဘူးလုပ်ငန်းတွေအတွက် လုပ်ဆောင်မှုမြင့်မားပြီး ခေတ်မီတဲ့ အော်တိုလိုင်းတွေအသုံးပြုနိုင်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးနေပါတယ်။3in 1 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးသောစက်တွေအပြင် Viet An ကုမ္ပဏီဟာ VAQGF စက်တွေနဲ့ တွဲသုံးလို့ရတဲ့ အခြားသော ပေါ်တိုလိုင်းတွေကိုလည်း ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ အောက်ဖော်ပြပါအကြောင်းအရာများသည် VAQGF စက်တွေနဲ့ ပေါင်းသုံးလို့ရတဲ့ အဆင့်အချို့ ဖြစ်ပါတယ်။
1. BG-600 automatic decapping machine
It has compact design, enabling space saving. Applying the most advanced US technology of decapping, this BG-600 automatic decapping machine can operate decapping in justamoment. The caps remain intact after being decapped and can be reused. => saving cost.
BG-600 automatic decapping machine is designed with 1 decaping head, using piston thrust to decap out with the pressure from 0.6-0.8 Mpa. The decapping capacity is from 300-600 caps/hour
ဒီစက်က ကျစ်လျစ်တဲ့ပုံရှိပြီး နေရာအများကြီး မလိုပါဘူး။U.S ရဲ့ ခေတ်ရှေ့ပြေးတဲ့ နည်းပညာကြောင့် ဒီစက်ဟာ အဖုံးတွေကို အချိန်ခဏလေးအတွင်း ခွာပေးနိုင်ပါတယ်။ အဖုံးတွေက ခွာပြီးတဲ့အခါ ပုံစံမပျက် ကျန်ရှိနေပြီး ပြန်လည်အသုံးပြုလို့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
BG-600 စက်ကို အဖုံးခွာတဲ့စက်ခေါင်းတစ်ခုနဲ့ ဒီဇိုင်းဆင်ထားပြီး 0.6-0.8 Mpa ဖိအားအောက်မှာ ပစ်စတိုတွန်းအားကိုသုံးပြီး အဖုံးခွာပေးပါတယ်။ဒီစက်ကို တစ်နာရီကို အဖုံး ၃၀၀ ကနေ ၆၀၀ အထိ ခွာပေးနိုင်ပါတယ်။
Technical specifications of BG-600 automatic decapping machine
(BG-600 အော်တို အဖုံးချွတ်ပေးသောစက်၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ)
Capacity (cap/h)( လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း) 300-600
Decapping heads (အဖုံးချွတ်သောခေါင်း) 1
Electricity supply (kw) (လျှပ်စစ်အားထောက်ပံ့ပေးမှု) Air
Pressure (Mpa)( ဖိအား) 0.6-0.8
Size (LxWxH)( အရွယ်အစား) 500x750x1800
Weight (Kg)( အလေးချိန်) 48
2. ST-600 automatic jar cleaning machine
ST-600 automatic jar cleaning machine isagreat suggestion for our customers. With the ability to clean the jars automatically, the machine has5cleaning heads,5jar brushes to help the businesses remarkably save labor costs. The cleaning capacity can be up to 600 jars/hour.
This machine is suitable for washing 20L jars after being used. You can make of use of the waste water RO membrane to save water.
ဒီစက်က customer တွေအတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ အကြံဥာဏ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။သန့်ရှင်းပေးတဲ့ ခေယင်း ၅ ခုနဲ့ brush ၅ ခုပါရှိပြီး အော်တိုသန့်ရှင်းပေးနိုင်တဲ့ အရည်အချင်းကြောင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေက အလုပ်သမားကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချနိုင်တယ်။ ဒီစက်က တစ်နာရီကို ပုလင်းပေါင်း ၆၀၀ အထိ သန့်ရှင်းပေးနိုင်ပါတယ်။
ဒီစက်က အသုံးပြုပြီးသား ၂၀ လီတာပုလင်းတွေကို ဆေးကြောဖို့ သင့်တော်ပါတယ်။ ရေခြွေတာဖို့ R.O membrane ကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Technical specifications of ST-600 automatic jar washing machine
(ST-600 ပုလင်းသန့်ရှင်းပေးသောစက်၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ)
Capacity (jar/h) (လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း) 450-600
Cleaning head(သန့်ရှင်းရေးခေါင်း) 5
Electricity supply (kw) (လျှပ်စစ်အားထောက်ပံ့ပေးမှု) 1.2-1.5
Pressure (Mpa) (ဖိအား) 0.7-0.8
Size (LxWxH)( အရွယ်အစား) 1850x1100x1800
Weight (Kg)( အလေးချိန်) 230
BL 450 ပုလင်းတွေသယ်ပေးတဲ့စက်
The 20L jar loading machine is designed with3loading heads. This machine helps to load the washed jars to the VAQGF4503in 1 filling machine to be sprayed with pure water with sterilized ozone, ensuring sterilization and removal of dirt inside. The capacity of the machine is up to 450 jars/hour.
ဒီစက်ကို သယ်ယူပေးတဲ့စက်ခေါင်း ၃ ခုနဲ့ ဒီဇိုင်းဆင်ထားတယ်။ ဒီစက်က ဆေးပြီးသားပုလင်းတွေကို3in 1 VAQGF လောင်းဖြည့်ပေးတဲ့စက်ထဲကိုသယ်ဆောင်ပေးပြီး ပုလင်းအထဲမှာ အညစ်အကြေးတွေမရှိစေရန် ပိုးသတ်တဲ့အိုဇုမ်းပါတဲ့ရေသန့်နဲ့ ဖြန်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစက်က တစ်နာရီကို ပုလင်းပေါင်း ၄၅၀ ကို ရွှေ့ပေးနိုင်ပါတယ်။
Technical specifications of BL-450 automatic jar loading machine
(BL-450 အော်တို ပုလင်းသယ်ယူပေးသောစက်၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ)
Capacity (jar/h) (လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း) 450
Loading head (ပစ္စည်းသယ်သောခေါင်း) 3
Size (LxWxH)( အရွယ်အစား) 1350x960x1200
Weight (Kg)( အလေးချိန်) 90
CL1200 automatic jar cap loading machine
Application: The machine will automatically supply more caps or stop supplying depending on the quantity left in the cap heads. Ensure that 100% of the caps are not reversed.
The operators put full caps into the tray of the cap loading machine. Then, the machine will automatically transfer the caps to the cap duct of VAQGF 4503in 1 automatic filling machine through the conveyor system.
ဒီစကျကို အသုံးပွုမယျဆိုရငျ ထုတျလုပျသူတှကေ ထုတျလုပျနတေဲ့အခြိနျအတှငျး အဖုံးတှပေဲုပကျြသှားမှာကို စိုးရိမျစရာ မလိုတော့ပါဘူး။ဒီစကျကို ရှလြေ့ားစကျမျောတာ၊ရှလြေ့ားစကျခါးပတျ၊အဖုံးထညျ့တဲ့ဗနျး၊လမှေုတျစကျနဲ့ မကျြလုံးဆငျဆာစနဈတို့နဲ့ တပျဆငျထားပါတယျ။
ဒီစကျက အဖုံးတှကေို အဖုံးထညျ့တဲ့ဗနျးထဲက အရအေတှကျပျေါမူတညျပွီး အျောတိုသယျဆောငျပေးပါတယျ။
အျောပရတောတှကေ စကျရဲ့ဗနျးထဲကို အဖုံးတှအေပွညျ့ထညျ့ပါမယျ။ထို့နောကျ စကျက အဖုံးတှကေို ရှလြေ့ားစကျစနဈကို ဖွတျပွီး VAQGF 450 စကျရဲ့ အဖုံးပွှနျထဲကို ရှပေ့ေးမှာ ဖွဈပါတယျ။
(CL-1200 အော်တို ပုလင်းအဖုံးသယ်ယူပေးသောစက်၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ)
Electricity supply (kw) (လျှပ်စစ်အားထောက်ပံ့ပေးမှု) 0.18
Size (LxWxH)( အရွယ်အစား) 600*600*3000
The purpose of the DJ-100 is to detect anomaly. During the process of producing bottled pure water, the manufacturers need to ensure the quality of their own water bottles. Therefore, the customers can install this Anomaly inspection machine (DJ-100) to inspect anomaly at the rate of 5-10% produced jars.
With2lights integrated into the light holder, the anomaly inspection machine will help the operators easily find the anomaly of the jars after they are fully filled and capped with the VAQGF 4503in 1 automatic filling machine.
ဒီစက်ရဲ့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်က မူမမှန်မှုကို စစ်ဆေးဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ရေသန့်ဘူးတွေ ထုတ်လုပ်တဲ့နေရာမှာ ထုတ်လုပ်သူတွေက ရေသန့်ဘူးတွေရဲ့ အရည်အသွေးကို သေချာအောင် လုပ်ရပါမယ်။ဒါကြောင့် customer တွေက 5-10% နှုန်းနဲ့ ထုတ်လုပ်ပေးနေတဲ့ ဒီစက်ကို တပ်ဆင်သင့်ပါတယ်။
ဒီစက်မှာပါတဲ့ မီး ၂ ခုကြောင့် အော်ပရေတာတွေက ပုလင်းထဲမှာရှိတဲ့ အရည်အသွေးမပြည့်မီတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို လွယ်ကူစွာ စစ်ဆေးနိုင်မှာ ဖြစ်တယ်။
(DJ-100 မူမမှန်မှု စစ်ဆေးပေးသောစက်၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ)
Electricity supply (kw) (လျှပ်စစ်အားထောက်ပံ့ပေးမှု)3x 20w
Size (LxWxH)( အရွယ်အစား) 600x200x1000
6. SK-450 Steam Membrane Shrinking Machine
SK-450 ရေနွေးငွေ့ဖြင့် အလွှာကို ရှုံ့ပေးသောစက်
Technical specifications of SK-450 Steam membrane shrinking machine
(SK-450 ရေနွေးငွေ့ဖြင့် အလွှာကို ရှုံ့ပေးသောစက်၏ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ)
Capacity (jar/h)( လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း) 400-450
Electricity supply (kw)( လျှပ်စစ်အားထောက်ပံ့ပေးမှု) 24
Size (LxWxH)( အရွယ်အစား) 1500x550x800
7. SK-450E Heat membrane shrinking machine
In addition to the steam membrane shrinking machines, Viet An also supply heat membrane shrinking machines. The machine uses heat to cover the jars with polymer membrane, With special design, the temperature inside the shrinking chamber is kept unchanged toacertain level, ensuring that the shrink film is even, nice and not wrinkled.
SK-450E အပူဖြင့် ပုလင်းအလွှာကို ရှုံ့ပေးသောစက်
ရေနွေးငွေ့ဖြင့် အလွှာကို ရှုံ့ပေးတဲ့စက်အပြင် Viet An မှ အပူဖြင့်အလွှာကိုရှုံ့တဲ့စက်ကိုလည်း ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ ဒီစက်က အပူကိုသုံးပြီး
ပုလင်းတွေကို ပေါ်လီမာရှုံ့ပေးတဲ့ဖလင်တွေနဲ့ ဖုံးအုပ်ပေးပါတယ်။
ခေတ်မီတဲ့ နည်းပညာကြောင့် အကန့်ထဲမှာရှိတဲ့အပူဟာ အော်တိုထိန်းညှိထားမှာ ဖြစ်တယ်။ အပူအကန့်က အတွင်းထဲက အပူကို တည်ငြိမ်စေပြီး ရှုံ့ပေးတဲ့နှုန်းကိုလည်း အရည်အသွေးကောင်းကောင်းနဲ့ မြန်စေမှာဖြစ်တယ်။
Technical specifications of SK-450E Heat membrane shrinking machine
(SK-450 E အပူဖြင့် ပုလင်းအလွှာကို ရှုံ့ပေးသောစက်၏ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ)
Capacity (jar/h) (လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း) 400-450
Electricity supply (kw) (လျှပ်စစ်အားထောက်ပံ့ပေးမှု) 24
8. CSG-6 Plastic conveyor for empty jars
Saving labor costs is essential for production and business activities in the current automation era. These plastic conveyors will help you move the jar through the stages without labor forces. When the conveyor motor operates, the empty cylinders will be moved from one position to another quickly, savingalot of installation space.
ပုလင်းလွတ်တွေအတွက် ပလက်စတစ်သယ်ယူကိရိယာ CSG-6
ယနေ့လို အော်တိုခေတ်ထဲမှာ ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ခြင်းတွေနဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက် အလုပ်သမားကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ဒီစက်က အလုပ်သမားတွေမပါဘဲ အဆင့်တွေကို လုပ်ဆောင်မှာဖြစ်တယ်။ရွေ့လျားစက်မော်တာက အလုပ်လုပ်တဲ့အခါ ဆလင်ဒါအလွတ်တွေက တစ်နေရာနဲ့ တစ်နေရာ မြန်မြန်ရွေ့လျားမှာဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် တပ်ဆင်တဲ့နေရာလည်း အများကြီး မကုန်ပါဘူး။
Technical specifications of CSG-6 Plastic conveyor for empty jars
(ပုလင်းလွတ်တွေအတွက် ပလက်စတစ်သယ်ယူကိရိယာ CSG-6 ၏ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ)
Electricity supply (kw)( လျှပ်စစ်အားထောက်ပံ့ပေးမှု) 0.55
Size (LxWxH)( အရွယ်အစား) 6000x290
9. Stainless steel conveyor (for jars containing water) CSSG-5
The main use of stainless steel conveyor is to transfer the jars fully filled with water automatically, without labor forces. This will help the businesses reduce production costs, increase competitiveness
CSSG-5 ရေပါတဲ့ပုလင်းတွေအတွက် အစွန်းခံသံမဏိ သယ်ယူကိရိယာ
ဒီစက်က ရေအပြည့်ပါတဲ့ပုလင်းတွေကို အလုပ်သမားတွေမပါဘဲ ရွှေ့ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီလုပ်ဆောင်မှုက ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်တွေကို လျှော့ချနိုင်ပြီး စီးပွားရေးအင်အား ကောင်းလာစေပါတယ်။
Technical specifications of CSSG-5 Stainless steel conveyor
(CSSG-5 အစွန်းခံသံမဏိ သယ်ယူကိရိယာ၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ)
Electricity supply (kw)( လျှပ်စစ်အားထောက်ပံ့ပေးမှု) 0.75
Size (LxWxH)( အရွယ်အစား) 5000x290
10. BS-2 Automatic 5G jar cleaning and decapping machine
This isamachine used to decap and wash the jars. With only 3900 USD, the decapping process can be quicky operated with2decapping heads andawashing chamber.
This price level is completely suitable to all businesses producing bottled water currently.
BS-2 5G အော်တိုပုလင်းသန့်ရှင်းပေးပြီး အဖုံးချွတ်ပေးသောစက်
ဒီစက်ကို အဖုံးတွေချွတ်ပေးပြီး ဆေးကြောဖို့အတွက် သုံးပါတယ်။ အဖုံးချွတ်ပေးတဲ့ခေါင်း နှစ်ခုနဲ့ သန့်ရှင်းပေးတဲ့အကန့်ပါတာကြောင့် လုပ်ငန်းမြန်မြန်ပြီးမြောက်စေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဒီစက်ဟာ 3900 USD မျှသာ ကျသင့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဈေးနှုန်းက ရေသန့်ဘူးထုတ်လုပ်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေအားလုံးအတွက် အလွန်သင့်တော်တဲ့ ဈေးနှုန်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Technical specification of BS-2 Automatic 5G jar cleaning and decapping
(BS-2 5G အော်တိုပုလင်းသန့်ရှင်းပေးပြီး အဖုံးချွတ်ပေးသောစက်၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ ဖော်ပြချက်များ)
Electricity supply (kw)( လျှပ်စစ်အားထောက်ပံ့ပေးမှု) 1.9
Size (LxWxH)( အရွယ်အစား) 770x1250x1150
Viet An’s customer services:
Product warranty period is from 1 year and product maintenance time is lifetime. Viet An also has leading engineers with long-term experience in manufacturing and manufacturing machines that will advise customers to get the most perfect choice for them.
In order to bring the best benefit to customers, Viet An commits to help the customers enjoy with the best service with this VAQGF 4503in 1 automatic filling and capping machine.
Viet An ရဲ့ ဝန်ဆောင်မှု
ပစ္စည်းရဲ့ အာမခံချက်က တစ်နှစ်ဖြစ်ပြီး ပစ္စည်းရဲ့တည်တံ့မှုကတော့ တသက်တာဖြစ်ပါတယ်။ Viet An ကုမ္ပဏီမှ ဝါရင့်အင်ဂျီနီယာတွေက ဝယ်ယူသူတွေအတွက် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတွေဖြစ်အောင် အကြံဥာဏ်တွေ ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူသူတွေအတွက် အကောင်းဆုံးတွေ သယ်ဆောင်လာပေးဖို့ Viet An ကုမ္ပဏီမှ ဝယ်ယူသူများကို VAQGF 450 စက်ကိုဝယ်ယူတဲ့အခါ အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုတွေ ခံစားရဖို့ ကူညီပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Technical specifications of VAQGF 4503in 1 automatic 5G bottle washing, filling, capping machine
(3 in 1 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးပြီး အဖုံးတပ်ပေးသောစက် VAQGF 450 ရဲ့ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ)
A. VAQGF 4503in 1 automatic 5G bottle washing, filling, capping machine- A MUST -BUY ITEM
(3 in 1 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးပြီး အဖုံးတပ်ပေးသောစက် VAQGF 450-ဝယ်ယူသင့်သော ပစ္စည်း)
Capacity (jar/h) (လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း) 300-450
Extraction head (ထုတ်ယူသောခေါင်း) 3
Capacity (KW) (လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း) 10
Size (LxWxH) (အရွယ်အစား) 4600x1950x2110
Weight (Kg)( အလေးချိန်) 1100
B. VAQGF 4503in 1 automatic 5G bottle washing, filling, capping machine, OPTIONAL STAGES(၂၀ လီတာပုလင်းတွေကိုလောင်းဖြည့်ပေးသော VAQGF 450 ရဲ့ ဝယ်ယူရန်ရွေးချယ်နိုင်သည့် အဆင့်များ)
1. BG-600 automatic decapping machine(BG-600 အော်တိုအဖုံးချွတ်ပေးတဲ့စက်)
2. ST-600 automatic external jar washing machine (ST-600 ပုလင်းသန့်ရှင်းပေးတဲ့စက်)
3. BL-450 automatic jar loading machine(BL 450 ပုလင်းတွေသယ်ပေးတဲ့စက်)
6. Steam Membrane Shrinking Machine for Jars SK-450(SK-450 ရေနွေးငွေ့ဖြင့် အလွှာကို ရှုံ့ပေးသောစက်)
7. SK-450E Heat membrane shrinking
Machine (SK-450E အပူဖြင့် ပုလင်းအလွှာကို ရှုံ့ပေးသောစက်)
8. CSG-6 plastic conveyor(ပုလင်းလွတ်တွေအတွက် ပလက်စတစ်သယ်ယူကိရိယာ CSG-6)
9. CSSG-5 Stainless steel conveyor (for jars containing water) (CSSG-5 ရေပါတဲ့ပုလင်းတွေအတွက် အစွန်းခံသံမဏိ သယ်ယူကိရိယာ)
10. BS-2 Automatic 5G jar cleaning and decapping machine(BS-2 5G အော်တိုပုလင်းသန့်ရှင်းပေးပြီး အဖုံးချွတ်ပေးသောစက်)
Hỏi đáp & đánh giá3in 1 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးပြီး အဖုံးတပ်ပေးသောစက် VAQGF 450